Germany Pamhepo Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(325 mavhoti, avhareji: 4.98 kubva 5)
Pamhepo kasino nzvimbo nzvimbo dzinotambira vatambi kubva kuGerman
Tarisa uone iwo mazita epamhepo kasino kasiti anotora vatambi kubva kuGerman uye vanopa yakakwirira-yepamusoro uye yakachengeteka mitambo yepamhepo. Pano iwe unowana yakasiyana siyana yevaraidzo kubva kune slot michina yekurarama mitambo yemitambo kubva kune vakakurumbira software vatengesi vakaita seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming uye nevamwe vazhinji.
Iwe unogonawo kuverenga yedu yepaIndaneti yekombiyuta reongororo kuti tive nepamusoro-svondo nepamusoro pekutengeswa kwepaIndaneti, mabhonasi uye nzira dzokubhadhara dzinowanikwa kune vatambi vanobva kuGermany.
Rwokutanga rwe10 German Online Online Casino Sites
Kubhejera kwave kwakatova nepamutemo muGermany. Kusvikira munguva pfupi ichangopfuura, mutemo webato rekubhejera wakaramba uine hurumende dzemunharaunda dzenyika dzakasiyana-siyana. Nhasi, kubhejera muGermany kunodzorwa pane imwe nzvimbo yakakwirira.
Kuzivikanwa kwekubhejera kwakadonhedzwa muZ1900 nemhaka yehondo uye kupatsanurwa kwenyika, asi pamusoro pemakore gumi apfuura mukurumbira kwavo kwawedzera. Munyika yose yeGermany pane makasinos akawanda uye ane kodzero yekubhejera, iyo inoshandiswa kusimba zvakasimba. Asi pasinei neizvi, kubhejera muGermany kunonyanya kufarirwa. Pashure penguva pfupi kubva ku2008 kusvika ku2012, apo kubhejera kwaifungidzirwa kusiri pamutemo pasi pemutemo wehurumende (kunze kweSchleswig-Holstein), hurumende yeGermany yakatanga mitemo mitsva inotungamirira kubvumirwa kwekubhejera vanoshanda.
Kusvikira 2012 nhoroondo yekubhejera muGermany yakanga yakaoma zvikuru. Cherechedza mubhuku redu rekubhejera rekutengesa kuti pasinei nekuti kubhejera nemakasinoni zvinobvumirwa nomutemo munyika, mamiriro ekubhejera paIndaneti haisi pachena zvachose. Nharaunda yacho yakanga isingatongorwi kusvikira ku2008, apo kubvumirwa kwemutemo kubhejera kwakaiswa. Zvisinei, iyo yekupedzisira yakarambwa neEuropean Union mu2010. Mushure mekuda kwechisarudzo ichi, ruwa rweGermany rweSchleswig-Holstein rwakagamuchira mutemo wayo wekubhejera paIndaneti nekuda kwekupa mvumo kune vanoverengeka vekutsvaga paIndaneti.
Mukuwedzera, muna 2012, Chibvumirano cheGomes Chibvumirano cheGomes chakanyorwa zvakanyatsorongeka, chichidzivisa zvachose kubhejera paInternet. Zvaitarisirwa kuti hurumende dzezvematongerwo enyika dzichati dzichiritsigira. Saka zvakaitika, kunze kweruwa rweSchleswig-Holstein. Asi, pakupedzisira, chirongwa ichi chinopandukira chakatora nzira yakarongedzwa nehurumende, uye yakavandudza mutemo wayo. Zvisinei, vasati vaita izvi, vakaramba vachibudisa zvikwangwani zve 23 kuInternet casino sites kwenguva ye 6 yemakore.
Muna Chivabvu 2013, yekutanga yeGerman online kasino ine dhatabhesi "de" yakavhurwa pahwaro hwerimwe rezinesi iri. Hurumende haisati yakwanisa kunyoresa zviri pamutemo zviitiko zvepamhepo zvekubheja nzvimbo kuGerman nekuda kwematambudziko akasangana nawo mukudzora maitiro. Naizvozvo, vatambi veGerman vanoshandisa masevhisi ekune dzimwe nyika pamhepo nzvimbo dzekubhejera dzinowanikwa muchiGerman kana Chirungu.
Zvinyorwa zvitsva zvekutsvaga casino muGermany:
casino tiza uye tora einzahlung
dublinet bonus code
saint vincent yepamusoro roulette automaten
saint vincent mukuru roulette spielautomat
rising of anubis freispiel
aces uye eights freispiel
fair go casino no deposit bonus mito November 2017
0.1 Rwokutanga rwe10 German Online Online Casino Sites
2.1 Kubhejera muGermany
2.2 Kubhejera kuGermany
3 Zvinyorwa zvitsva zvekutsvaga casino muGermany:
slot rombo rakanaka dhizai